Fampiharana 7 ahafahana manao antso maimaim-poana amin'ny smartphone | Vaovao momba ny gadget
Fampiharana 7 ahafahana manao antso maimaim-poana amin'ny smartphone
Ny rindranasan-kafatra fandefasana hafatra eo no eo dia malaza manerantany ary miaraka amin'izany no nahaizan'izy ireo nanary ny fampiasana SMS na hafatra an-tsoratra. Vao tsy ela akory izay, saika isika rehetra dia nampiasa an'io fomba io hifandraisana amin'ny fianakaviana na namana, fa ankehitriny dia saika tsy misy mampiasa azy ireo. Misy zavatra mitovy amin'izany efa mitranga amin'ny antso tahaka ny ahafantarantsika azy ireo ankehitriny.
Ary ireo magazay fampiharana samihafa ho an'ny fitaovana finday dia mameno haingana ireo rindranasa samihafa ahafahanao miantso, maimaim-poana, ary miantehitra amin'ny tambajotra WiFi na ny tahan'ny data. Mba hahafantaranao ireo rindranasa tsara indrindra amin'ity karazany ity, anio dia hasehonay anao Fampiharana 7 ahafahana manao antso maimaim-poana amin'ny smartphone.
Raha tsy te handoa denaria iray ianao amin'ny antso iray, dia avereno vakio, ary safidio ny rindranasa tianao sintonina, izay hasehonay anao eto ambany, hanao antso betsaka araka izay tadiavinao nefa tsy mandany na inona na inona mihitsy.
WhatsApp Io no fampiharana fandefasan-kafatra mailaka be mpampiasa eran'izao tontolo izao ary be mpampiasa. Ho fanampin'izany, manolotra antsika ihany koa ny fahafahana manao antso am-peo, maimaim-poana tanteraka, na dia mandany data aza izany. Raha sendra mifandray amin'ny tamba-jotra WiFi ianao dia tsy hisy ny olana, fa raha manao izany amin'ny fampiasana ny tahan'ny angon-drakitrao ianao dia mitandrema, satria lehibe ny fanjifana ary afaka lany data ao anaty indray mipy maso ianao.
Ny kalitaon'ny antso dia tsara ary ny tombony lehibe dia Ny ankamaroan'ny mpampiasa dia manana ny rindrambaiko WhatsApp napetraka ao amin'ny finday avo lenta, noho izany tsy hisy olana ho anao ny miantso namana na mpianakavy.
WhatsApp no ​​fampiharana be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao, na dia any Shina sy Japon aza ny fanjakany dia tsy dia mavesatra loatra, ary na amin'ny firenena roa na amin'ny firenena hafa. -dalana, io no serivisy be mpampiasa indrindra. Mazava ho azy fa manolotra ny mety hanaovana antso ary koa antso an-tsary miaraka amin'ny sasany hafa noho ny tombony mahaliana.
Ary izany tokoa Line dia serivisy multiplatform izay, ohatra, mamela antsika hanao antso amin'ny feo na horonan-tsary, tsy avy amin'ny finday ihany fa avy amin'ny solosaina na ny takelaka.
Ny lafiny ratsy dia ny fiantsoana feo ary mazava ho azy fa ny antso an-tsary dia mandany angona be dia be avy amin'ny salanay. Ho fanampin'izay, ny kalitaon'izy ireo dia azontsika lazaina fa mamela be dia be irina, afa-tsy amin'ny fotoana tsy fahita firy.
Iray amin'ireo fampiharana fandefasana hafatra eo noho eo ny Viber izay iray ihany koa tamin'ny voalohany nanolotra ny mety hanaovana antso am-peo IP. Hatramin'izao dia mbola tsy nahita fahombiazana izany taona vitsivitsy lasa izay, fa manohy manandrana miaina hatrany nefa tsy voafafa amin'ny sarintany avy amin'ny WhatsApp na Telegram, roa amin'ireo fanovozan-kevitra lehibe indrindra eto amin'ity tsena ity.
Ny fiasan'ity rindranasa ity dia tena tsara tokoa, saingy ny fatiantoka lehibe dia ny isan'ny mpampiasa mampiasa an'io fampiharana io, noho izany noho ny serivisy sy kalitaon'ny antso avo izay natolotr'izy ireo dia sarotra be ny manararaotra an'io satria namana na fianakaviana vitsivitsy ihany no azontsika antsoina izay mbola mampiasa ity rindranasa ity.
Azo antoka fa raha tsy manana tahan'ny telefaona Amena ianao dia tsy ho be loatra aminao ity fampiharana ity. Ary izany ve Libon dia fampiharana fandefasan-kafatra eo noho eo, izay ahafahanao manao antso na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao, izay miara-miasa akaiky amin'i Amena sy Orange. Ny fiasan'izy io dia tena mitovy amin'ny an'ny Skype, ary mamela anao hanana minitra vitsy hanaovana antso izy, miaraka amin'ny hany fahasamihafana azonao iantsoana ny mpampiasa anao, na manana ilay fampiharana izy ireo na tsia.
Ny tombony an'ity fampiharana ity dia izay Amin'ny fandraisana karama Amena, ohatra, dia hahazo minitra maimaim-poana ianao hiantsoana any ivelany ary azo ekena ny kalitaon'ny antso, indrindra raha manana fifandraisana tsara amin'ny tamba-jotra.
Mazava ho azy fa tsy ho diso anjara tamin'ny fotoana nifanarahana tamin'i Google i Google raha hanao antso am-peo maimaim-poana. Hangouts iray monja amin'ireo andrana maro nataon'ny mpikaroka fikarohana ny manandrana mahazo toerana eo amin'ny tsenan'ny fandefasan-kafatra eo noho eo. Ahoana no ahafahana manao izany raha tsy izany, ny serivisy Google dia mamela ny antso an-tariby, na dia tsy miaraka amin'ireo aza dia nahavita nanintona mpampiasa be loatra ity serivisy ity.
Anisan'ireo tombony atolotray antsika, izay tsy tokony ho tsy voamariky akory nefa dia manao izany tsy tapaka, dia izany Mamela antsika hanao antso eo amin'ny mpampiasa maromaro, antso an-tsary marobe na koa videoconferansa mihitsy aza. Ireo safidy ireo dia tsy misy amin'ny fampiharana be loatra, saingy ao amin'ny Google Hangouts izy ireo.
Amin'ny lafiny ratsy dia ny famolavolana ny fampiharana na ny fiasa kely omeny ny mpampiasa. Raha te-hanana mpampiasa ho an'ny Hangouts i Google, dia tsy isalasalana fa mila famerenana mandrafitra sy famerenana endrika ny serivisy fandefasan-kafatra.
Fampiharana iray hafa izay tsy dia fantatra loatra dia Upptalk, izay mahaleo tena tanteraka amin'ny mpandraharaha rehetra ary mamela antsika, toy ireo rehetra izay nodinihinay, hanao antso maimaim-poana ary hiantehitra amin'ny fifandraisana amin'ny tamba-jotra.
Ny tombony lehibe amin'ny Upptalk dia izany serivisy fampitaovana maro karazana izy io, azo alaina ho an'ny Android, iOS, Windows Phone, fitaovana fiasa Windows 10 Mobile, ary koa ireo fitaovana Kindle Fire HD.
Ny fatiantoka dia tsy toy ny Libon ohatra, ilaina fa ny mpampiasa antsointsika dia tsy maintsy manana ny fampiharana apetraka amin'ny fitaovany, satria raha tsy izany dia tsy ho afaka hamaly anay izy ireo.
Mba hanidiana ity lisitry ny rindranasa 7 ity izay ahafahantsika miantso maimaimpoana amin'ny finday avo lenta finday, dia manome anao kilasika tena izy toa izany Skype izay mandraka androany dia mbola serivisy ampiasain'ny mpampiasa maro be.
Araka ny efa fantatry ny ankamaroanareo mazava tsara amin'ny Slype dia afaka manao antso maimaim-poana ianao, ary koa antso iraisam-pirenena izay tsy maintsy ananantsika minitra maromaro eo aloha, izany dia amin'ny vidiny mora indrindra ho an'ny ankamaroan'ny paosy ary raha ampitahaintsika amin'ny vidin'ny serivisy hafa an'ity karazana mpampiasa finday ity.
Ny tombony lehibe azo amin'ny Skype raha ampitahaina amin'ireo rindranasa na serivisy hafa amin'ity karazana ity dia ny kalitao omeny amin'ny antso. Ho fanampin'izany, tokony homarihina ihany koa fa amin'ity serivisy ity dia azontsika atao koa ny mampiasa ny safidy fanaovana antso an-tsary.
Inona ny rindranasa na serivisy ampiasainao matetika hampiantsoana feo amin'ny alàlan'ny finday avo lenta?.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Software » Fampiharana 7 ahafahana manao antso maimaim-poana amin'ny smartphone
Ahoana ny fomba hanakanana sy hamafana ireo tag amin'ny sary Facebook
Top 5 safidy hafa amin'ny Evernote ho mpitantana ny lahasa